Akụkọ - China Kachasị Compost Turner-M6300
Nnukwu Compost Turner-M6300 nke China
Nzaghachi si Ahịa
Adreesị Ọrụ: Ugbo ugbo di na ugwu nke China
Isi ihe onwunwe: Nri ehi nke ahịhịa anụ, nri ala atụrụ
Ike kwa afo nke Anumanu Anumanu: Ọ bụ tọn 78,500
Dabere na Mịnịstrị nke Ugbo China, China na-ewepụta ihe ruru ijeri tọn 4 nke mkpofu anụmanụ kwa afọ. Dịka nnukwu ugbo anụ ụlọ dị na mgbago mgbago ugwu China, iji nri anụmanụ ndị a eme ihe nke ọma dị ezigbo mkpa. Site n'enyemaka nke TAGRM nsị anụ nri anụmanụ, anụ ụlọ nwere ike ịtụgharị, kpalite, gwakọta, azọpịa na oxygenate akụrụngwa akọrọ gụnyere nsị ehi, nsị atụrụ, ahịhịa na ihe ndị ọzọ, wee mee ka ha bụrụ fatịlaịza bara uru.
Agbanye igwe: TAGRM compost ntụgharị M6300
Na-arụ ọrụ ikike: 3780m³ / awa
Dị ka nnukwu igwe fatịlaịza fatịlaịza bio, igwe TAGRM na-eme M6300 ka emebere ruo mita 3780 nke compost kwa elekere dabere na ụdị na ogo nke Turner. Rumdị ndị na-atụgharị ikuku na-atụgharị ihe eji arụ ọrụ igwe na-acha uhie uhie na flails nke na-eme ka windpost compost. Ọ na-ebutekwa ihe na-ebuli elu nke hydraulic, na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ígwè na-enweghị ntụpọ, a na-ejikwa akwa ígwè na-eguzogide ọgwụ na-adịghị mma. Nkọwapụta nke sayensi na-enye ohere ka onye na-atụgharị compost kpochapụ ihe akụrụngwa na 1/1000 nke mgbasa nke akụrụngwa gụnyere ịgwakọta na ngwakọta zuru oke, yana ikuku oxygenating na jụrụ.
TAGRM na-echekwa usoro mbara igwe nke ụwa. Site n'inyere & ịgba ndị mmadụ ume gburugburu ụwa ka ha jiri nsị anyị mee ihe nke ọma, dị ka mkpofu obodo, swill na mkpofu nri, nsị anụmanụ, wdg, TAGRM na-anwa ike ya ichebe ụwa anyị yana ịnyekwu ụlọ ọrụ dị mkpa .
Pịa ebe a maka nkọwa ndị ọzọ banyere TAGRM M6300 anụ ụlọ ma ọ bụ ndị ahịa nzaghachi video nke M6300.
Post oge: Jul-22-2021